VLC Alternatives - Mma Players karịa VLC
VLC Alternatives- Mma Players karịa VLC
Ọ bụ ezie na VLC ọkpụkpọ bụ free na-abịa na njirimara dị iche iche, ị pụrụ anya n'ihi na a VLC ọzọ ruru ka nsogbu dị ka manụ "iwughachi Font Cache" ihe na-enweghị omume enyi UI. Lee, m depụta 5 ezi VLC ọkpụkpọ uzo ozo nke bụ ọbụna karịa ka VLC. N'ihi ya, kama scouting na Internet maka dochie ọkpụkpọ, gịnị mere bulie otu si ndepụta? Na-agụ na na chọpụta nke otu suut gị mma.
Nkebi nke 1: VLC Media Player Alternatives maka Windows
Part 2: VLC Media Player Alternatives maka Mac
Part 3: VLC Media Player Alternatives maka iOS
Part 4: VLC Media Player Alternatives maka Android
Wondershare Player Bụ a FREE mgbasa ozi ọkpụkpọ nke nwere ike igwu nta ka ọ bụla video, ọdịyo na sobtaitel formats dị ka MKV, WMV, MPEG, AVI, WMA, MP3, M4A, AAC, FLAC, ịnyịnya ibu, SSA na SRT. Ya mere ị na-adịghị wụnye ọ bụla ọzọ mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ codec. Ụfọdụ n'ime atụmatụ dị ka sobtaitel ntọala, playback mode nhọrọ, ọdịyo track ịmafe, snapshot inweta na ndị ọzọ eme ka i nwee mgbanwe akara n'elu playback. Ọzọkwa, ekele na Wondershare si otutu Oke X technology, ọ bụla nkiri amalite na-akpọ n'otu ntabi na-anọgide na-akpọ seamlessly, nke na-enye gị a nkiri-dị ka ahụmahụ dị ka mgbe n'ihu!
RealPlayer bụ a na-ewu ewu mgbasa ozi ọkpụkpọ n'elu Ịntanetị. Ọ na-akwado dị iche iche na-ewu ewu formats gụnyere WMV, WMA FLV, AVI, MP3, MP4, 3GP na ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, ọ nwere ike tọghata gị video faịlụ n'ime dị iche iche formats na download nkwanye ọdịnaya online, Gịnị bụ ihe ndị ọzọ, i nwere ike ịkọrọ gị mkpachị na ndị enyi na Facebook. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ihe atụmatụ, ị kwesịrị ị na-akwụ $49.99 na-RealPlayer Plus 16.
KMPlayer bụ a free na fechaa media ọkpụkpọ maka Windows 2000 / XP / Vista / 7. Nkwado nke a dịgasị iche iche nke music na video codecs-eme ka ọ a n'ezie ọzọ nke VLC ọkpụkpọ. E wezụga, i nwere ike hazie ya dị ka amasị gị, ihe atụ, ị nwere ike ịkụda ma ọ bụ dịkwuo playback ọsọ, họrọ akụkụ nke a video dị ka ọkacha mmasị, unu AB akuko, họrọ ọkacha mmasị gị skins na agba atụmatụ, wdg
UMPlayer bụ ihe dị mfe na-eji media ọkpụkpọ. Ọ na-akwado kasị ewu ewu na formats. I nwekwara ike ịchọ vidiyo na YouTube, igwu egwu online TV na redio. E wezụga na, ọ na-enye gị nhọrọ ibudata ndepụta okwu na-akpaghị aka site na opensubtitles.org. p
DivX bụ ihe ọzọ ọma ọzọ ka VLC. Ọ nwere ike na-egwu kasị ewu ewu na video formats. E wezụga nke ahụ, ị nwere ike iji ya na-ekiri gụgharia vidiyo na DivX, AVI na MKV formats site na web ọkpụkpọ. Ọ na-enye ndị na-faịlụ Ntụgharị, nke na ị nwere ike ịmepụta na nkwado ndabere ọdịnaya ma ọ bụ tọghata ha n'ime DivX ma ọ bụ MKV.
A mmemme a ike sipper, otú ọ gaghị achọ gị processor, ma ọ ka nwere ton nke atụmatụ. Ọ bụ ike nke na-akpọ a dịgasị iche iche nke video formats, na o nwere isi na sobtaitel ike. Ị pụrụ ọbụna ịgbanwe ndepụta okwu anya otú ị chọrọ ka ha nakwa dị ka ịgbanwe asụsụ, ọbụna n'oge nkiri playback. Ọ bụrụ na ị na-ekiri a widescreen nkiri na a 4: 3 ileba anya, ị nwere ike ahu nagide pan na ike iṅomi mma ka-enwe ike ịhụ dum ihe. Hotkeys bụ programmable maka ọkacha mmasị gị atụmatụ.
Nke a freeware ọkpụkpọ na-ahapụ gị na-egwu na ntọala iji nweta naanị nri mix maka gị. Dakọtara na Windows 8, ọ na-enye gị azụ gị DVD ọkpụkpọ na a tụfuru mgbe Windows kwụsịrị na-abịa na WMP. Ị pụrụ ọbụna Ibu Ibu ihe ngwa na-ahapụ gị iji gị Android na iOS obere ngwaọrụ dị ka ime njikwa. Mgbe usoro ihe omume dị free, ọ bịa na ụfọdụ ndị ọzọ omume bundled na, otú dị ka na KMPlayer, jide n'aka na ị na-ekiri ndị igbe n'oge echichi. GOM nwere ike igwu isi video formats na ọtụtụ n'ime gụgharia formats, kwa.
8. Media Player Omuma Home Cinema
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya Windows Media Player, a usoro bụ maka gị. E mere iji nwere na anya na obi na-adị nke WMP version 6.4, ọ bụ ezi omume n'ihi na DVD playback na-adịghị weghara a otutu ohere na kọmputa gị. Ọ na-adịghị ihe ọ bụla ọzọ omume bundled na, otú ị pụrụ wụnye na-aga, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na okenye kọmputa, kwa. Ị nwere ike hazie ya otú ị chọrọ ka, tinye toolbars, na mbugharị na na ọkacha mmasị gị nkiri. Bụghị naanị na ike ị na-egwu DVD ma ị nwekwara ike igwu vidiyo na nkịtị formats dị ka Real Video na AVI.
A mmemme free, na ike zuru ezu na-aka fọrọ nke nta niile nke gị videos, n'agbanyeghị usoro. Ọ na-abịa niile codecs Ọ chọrọ bundled na. Ọ nwere wuru na-ikike icheta ebe ị hapụrụ n'ime a nkiri, na ihe Ntọala ị na-eji, otú i nwere ike bulie nri ebe ị hapụrụ anya. SMPlayer e wuru na MPlayer, ma ọ bụrụ na ị na-eji ya n'ihu, ị ga-maara na SMPlayer. Ị nwere ike ibudata ndepụta okwu gị na ihe nkiri, na i nwere ike ịchọ ma na-ekiri YouTube vidiyo na SMPlayer, kwa. E nwere jụụ nzacha ị nwere ike nwalee, na ị nwere ike ịgbanwe playback ọsọ bụrụ na ị nke oge ma ị chọrọ ịrụcha nkiri.
Nke a freeware omume bụkwa emeghe iyi, na ijikọta a ton nke formats n'ime otu mfe iji ọkpụkpọ. Nke a ga-akpọ DVD na-enweghị ibudata codecs, na ị nwere ike ịgbanwe playback nhọrọ mfe. Iyi videos online, kwa. Ị nwere ike Ibu Ibu XBMC on ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke sistem, gụnyere OSX na Linux. Jikọọ gị android ngwaọrụ na iji ya dị ka a ime akara, kwa. XBMC bụ na ọtụtụ mmadụ mgbasa ozi nyiwe na Wikipedia bụrụ na ị na mkpa ọ bụla oru aka.
Na ihe ọ bụla nke a mmemme, i nwere ike iri ọkacha mmasị gị na fim ọ bụla na ị na-enwe mma video playback na ụda olu. -Enwe!
Nkebi nke 2: VLC Media Player Alternatives maka Mac
N'ihi na Mac, anyị shortlisted ndị a 4 uzo ozo maka VLC Player.
Ụfọdụ na-akpọ ya dị ka a elu ọzọ ka VLC Media Player.
1.Open isi iyi Media Player.
2.One nke kacha ụzọ ịchịkwa playback.
3.1- Pịa n'ihi na online video owuwu dị.
4.It achọpụta na-atọghata ndị ngbanwe usoro nke sobtaitel faịlụ-akpaghị aka na seamlessly.
A nnọọ ike aha ke Mac, nke bụ oké Media Player na n'etiti mmasị maka ọtụtụ ndị ọrụ!
1.It a na-akpọkarị ka ezigbo ọzọ ka VLC maka Mac.
2.Simple ma dị ike Media Player maka Mac.
3.Simple na ogologo-atụ nhọrọ dị nile di iche iche nke ukpụhọde ke interface.
4.Perfect maka ịkpọ dị iche iche faịlụ, mgbe ndị ọzọ media Player na-n'iyi.
QuickTime Player bụ ugbu a na ndabere media ọkpụkpọ. Ọ bụ, ya mere, ọtụtụ ndị maara Media Player maka Mac ọrụ.
1.Wonderful ndakọrịta na-egwu egwu vidiyo si na diski ike mbanye na internet abụọ.
2.Play ọsọ nwere ike ịtọ si 1 / 2x ka 3X nkịtị ọsọ.
3.QuickTime Player enye gị ohere ele Internet video, HD nkiri trailers, na onye mgbasa ozi na a obosara faịlụ formats gafee.
4.Provides nhọrọ ele n'ụzọ dị ịrịba ama elu àgwà videos.
DivX ọkpụkpọ bụ nnọọ ọzọ dị ike ọkpụkpọ maka Mac, nke na-eji maka HD videos playback dị ka ihe niile ala DivX videos, MKV na HEVC.
1.Easy iji interface.
2.Can nwekwara ike mee ka a video Ntụgharị.
3.Award emeri Software.
4.Capable na-agba ọsọ internet kasị ewu ewu na formats, gụnyere AVI, DivX, MKV, MP4 na ndị ọzọ.
Nkebi nke 3: VLC Media Player Alternatives maka iOS
The ukwuu nyochara ndepụta maka top 4 media Player maka iOS bụ dị ka ndị.
The Media Player nke na-enweghị mgbasa ozi na-egwu egwu video. Ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị dị ka ndị.
1.Allows videos na-egwu na .5x, 1.5x na 2x nkịtị ọsọ.
2.Support maka ndepụta okwu.
3.Drag na dobe nke ọ bụla nkiri faịlụ dị ukwuu.
Ọzọ dị ukwuu Media Player maka iOS.
1.Doesn't nwere ihe ọ bụla mgbasa ozi na-egwu egwu Video Files.
2.Facility nyere iji gbochie flipping mgbe ekwentị mkpanaaka na-agbagharị site na iji a button igbachi ihuenyo.
3.Perfect nke na-edebe kasị onwe, pụrụ iji jide na ndị ọzọ na videos n'ebe ọ bụla nke si ohere.
3 inye 3
Nke kacha mma n'etiti Player maka iOS, inye nwere ụfọdụ nke ọmarịcha atụmatụ, nke na-eme ha a ukwuu maka nke a n'elu ikpo okwu.
2.Full 64-bit nkwado, nke utịp ke ruru 20-40% mma arụmọrụ.
3.DTS-HD Audio n'ọbá akwụkwọ dị.
4.Networking ikike dị, si otú a na-eme ka a dị ike n'ụlọ media ngwá ọrụ.
Oplayer Lite bụ n'etiti oké aha maka iOS Media Players.
1.Boost Media ikike nke ekwentị gị na a ukwuu.
2.Can-eji na-enuba videos na audios n'elu internet.
3.It ike ga-eji na-egwu fọrọ nke nta niile na-ewu ewu video formats dị ka WMV, AVI, MKV, RM, RMVB, XviD, mp4, 3GP na mpg.
4.It akwado Apple Watch.
Nkebi nke 4: VLC Media Player Alternatives maka Android
Ebe a bụ ndepụta nke top Player maka Android.
Ndị kasị ewu ewu oke maka Android Ọrụ! N'ezie, nke a bụ ọbụna na ekwentị m. Otu nke kasị mma Media Players maka Android!
1.Supports niile faịlụ formats.
3.Streamlined ọrụ interface.
4.Kids igbachi Option dị.
Ọzọ Media Player, otu n'etiti n'elu ise na-eje ozi dị ka oké ọzọ maka VLC Media Player maka Android!
2.Kids igbachi owuwu dị.
3.Swipe na ogbugbu njikwa.
4.Ability na-ekiri videos na-ese n'elu mmiri window.
Otu nke kasị mma Media Player pụtara n'ihi na Android iche site VLC Media Player na MX Player.
1.Wonderful Nkwado maka otutu sere n'elu windows.
2.Supports ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ formats gụnyere MKV.
3.Sync Play atụmatụ dị, nke-enye gị na-ekiri otu media na ndị enyi gị n'elu Wi-Fi
4 na-ekwu Player
Ọzọ oké aha ke Android Market! Nwere ụfọdụ nke oké na-enweghị atụ atụmatụ, nke ọtụtụ ndị ọzọ Player adịghị nwere.
1.Powerful mkpọ ọmarịcha atụmatụ na nhọrọ.
2.It enye owuwu na-ekiri media faịlụ n'elu netwọk.
3.It akwado FTP, HTTP, Windows Share na WebDAV.
4.In N'eziokwu, ọ bụ a zuru okè oke maka netwọk gụgharia.
Ebe a bụ zuru ezu ndepụta niile media Player, nke nwere ike nakweere dị ka onye ọzọ maka VLC Media Player. Ọ na-adabere oke nke mmadụ n'otu n'otu, nke na otu onye ka ịmụta. Na oke kpamkpam na-adabere na onye mmasị nke ndị mmadụ n'otu n'otu. Ma, ị na-ahọrọ Media Players n'etiti ha ga-abụ ihe amamihe mkpebi ime na ma eleghị anya otu nke kasị mma ime.
Olee otú bugharia Videos na VLC
Olee otú iyi Video na Audio Iji VLC
Smart Ntụgharị Pro Alternative: A vasatail na kasị Video Ntụgharị
Windows Movie Onye kere Alternative: mma karịa Windows Movie Onye kere
> Resource> Alternatives> VLC Alternatives - 10 Mma Players karịa VLC